khitalinmedia - Page9of 164 - Just another WordPress site
မှီခိုတော့မှီခိုပါ …ဒါပေမဲ့ နေ့တိုင်း မိသားစုထမင်းဝိုင်းအတွက် စီမံလုပ်ကိုင်ပေးနေတဲ့ ဘ၀မျိုးမှာ လူတိုိုင်းနေနိုင်ရဲ့လား
January 19, 2020 Khitalin Media 0
မှီခိုပါရှင်၊ဒါပေမဲ့ … မိသားစုအလုပ်တွေကိုပဲနေ့နေ့ညည လုပ်ကိုိုင်ပေးရင်း ရှင်သန်နေတဲ့အိမ်ရှင်မအမျိုးသမီးတွေကို ကျမ အံ့သြမိပါတယ်။ အိမ်ရှင်မရဲ့ ပထမဦးစားပေးဟာ အတူနေမိဘရှိရင် မိဘ၊ မိဘမရှိရင် အိမ်ထောင်ဦးစီး ဖြစ်တဲ့ခင်ပွန်းပဲ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ဒုတိယဦးစားပေးဟာ ပညာသင်ကြားနေဆဲ သားသမီးငယ်တွေ၊ တတိယ ဦးစားပေးဟာ အရွယ်ရောက်နေတဲ့ သားသမီးတွေ၊ပြီးတော့အိမ်မွေး တိရိစ္ဆာန်တွေ၊ ပြီးတော့ ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ဧည့်သည်တွေ […]
ဒီကလေးမလေး ကျောက်ကပ်နဲ့ အသဲရောင်တာ ဆေးဆက်မကုနိုင်တော့လို့ အကူညီလိုအပ်နေပါတယ် ရှဲပေးကြပါ
Zawgyi ဒီကလေးမလေး ကျောက်ကပ်နဲ့ အသဲရောင်တာ ဆေးဆက်မကုနိုင်တော့လို့ အကူညီလိုအပ်နေပါတယ် ရှဲပေးကြပါ… ဒီကလေးမလေး ကျောက်ကပ်နဲ့ အသဲရောင်နေတယ်ပြောတယ် ဆေးဆက်မကုနိုင်တော့လို့ အကူညီ တကယ်လိုအပ်နေပါတယ် ဒီကမလေးရဲ့အောက်မှာ မောင်နှမ 7ယောက်ရှိပါသေးတယ် ဆေးရုံတင်ပီး ကုတယ် ပြောတယ် 15သိန်းလောက်ကုန်မယ်ပြောလို့ မကုနိုင်တော့လို့ အိမ်မှာပဲ ဆီးပိုက်တန်းလမ်းနဲ့ မထနိုင်ဘူး လိုက် […]
တရုတ်နိုင်ငံမှာသဘာဝလရောင်ထက် ၈ ဆ ပိုလင်းမယ့် လအတုလွှင့်တင်
တရုတ်နိုင်ငံမှာသဘာဝလရောင်ထက် ၈ ဆ ပိုလင်းမယ့် လအတုလွှင့်တင် ပညာရှင်တွေ ဖန်တီးထားတဲ့ ကိုယ်ပိုင် လတစင်းကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်မှာ လွှင့်တင်ဖို့ တရုတ်အာကာသ အေဂျင်စီက ပြင်ဆင်နေတဲ့အကြောင်း China Daily သတင်းမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ သဘာဝလရောင်ထက် ၈ ဆ ပိုလင်းမယ့် လအတုတစင်းကြောင့် […]
လူတစ်ယောက်ရဲ့ဗီဇ ဆိုတာ ပြင်လို့မလွယ်ဘူး ..ကိုယ်နဲ့ဗီဇ မတူတဲ့လူတွေကို ပြင်လို့ရနိုင်မှာပါဆိုပြီး ဇွတ် ဆွဲမထားပါနဲ့
လူနှစ်ယောက်ချစ်တယ်ဆိုတာ တစ်ယောက်ဂုဏ်သိက္ခာကို တစ်ယောက်ကလေးစားနားလည်ယုံကြည်ခြင်းပဲ။ ဘယ်မှာ ပထမဆုံး စ မြင်ဖူးတာလဲလို့မေးရင် စာအုပ်ဆိုင်ရဲ့ နောက်ဆုံးနားလေးက ခုံတန်းအမည်းလေးနားမှာလို့ ပြောရမယ်။ စာအုပ်ဆိုင်ထဲမှာ ဟိုရှာ ဒီရှာ လုပ်နေတုန်း သူက ခပ်ပြုံးပြုံး နှုတ်ဆက်တာကနေ ပထမဆုံး လူချင်း စ တွေ့ဖူးတာ။ စာအုပ်တွေအကြောင်း ပြောနေတုန်း ပြုံးကြည့်နေတဲ့သူ့ကို […]
ကျွန်းလှမြို့ ၊ သစ်ရာမြိုင် အ.ထ.က ကျောင်းက ကလေးတွေကြောင့် ဆရာမတွေလည်း နှစ်တိုင်း ငိုနေရတယ်
ယ္ခုရက်ပိုင်းတွေမှာဆိုယင်တော့ မြန်မာပြည်အရပ်ရပ်ရဲ့ ကျောင်းတိုင်းမှာ စုံညီပွဲတော်များ ကျင်းပနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒိ့ထဲကမှ အ.ထ.က သစ်ရာမြိုင်ရဲ့ စုံညီပွဲတော်မှာ ကျောင်းသားလေးတွေ ကြိုစားကပြထားတဲ့ ပြဇာတ်ဗွီဒီယိုလေးကို တင်ပြပေးလျင်ပါတယ်။ ကျွန်းလှမြို့ ရဲ့အ.ထ.က သစ်ရာမြိုင်ကျောင်း ဆိုတာကတော့ အစဉ်အလာရှိခဲ့တဲ့ကျောင်းတစ်ကျောင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ယမန်နှစ်ကလည်း “ခွင့်လွှတ်ပါဆရာ”ဆိုတဲ ပြဇာတ်ကလေးနဲ့ မိဘပြည်သူတွေရဲ့ ရင်ကို ဆွဲကိုင်လှုပ်ခဲ့ဖူးတာ မှတ်မိကြဦးမယ်ထင်ပါတယ်နော်။ […]
ငါတို့နှစ်ယောက် ပြန်ဆုံတွေ့ကြတဲ့အခါ ခြားနားချက်တွေ ၊ ကွဲပြားခြင်းတွေ မတူညီတဲ့ပုံစံတွေနဲ့ပဲဆိုပါတော့ ငါတို့နှစ်ယောက် ပြန်တွေ့ကြတဲ့အခါ…နင့်ရဲ့ဘေးမှာ နင့်အချစ်ဆုံး ရှိနေပြီးဖြစ်သလို. ငါ့ရဲ့ဘေးမှာလဲ ငါနဲ့အသင့်တော်ဆုံးသူ ရှိနေပြီနင့်အချစ်တွေ သူ့အတွက် ပုံအောပြီးသလောက်..ငါ့အချစ်တွေကို (တစ်ချိန်ကချစ်သူကို ပုံအောပြီးချစ်ခဲ့သလိုမျိုး) သူ့အပေါ် ပုံအောနိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေတုန်းနင်ကတော့ သူ့ဆီက နားလည်မှုတွေယူနေချိန်မှာငါကတော့ သူ့ဆီက နားလည်မှုကော နွေးထွေးမှုတွေပါ […]
အမျိုးသမီးအင်္ဂါကို လုံးဝ မလုပ်သင့်သည့်အရာများ(ကျန်းမာရေးအတွက်အရေးကြီးပါသည်)
အမျိုးသမီးအင်္ဂါကို လုံးဝ မလုပ်သင့်သည့်အရာများ(ကျန်းမာရေးအတွက်အရေးကြီးပါသည်) (၁) ပြွတ်နဲ့ထိုးသွင်းပြီး ရေမဆေးရ တစ်ချို့က Douching Advice (ရေပြွတ်ကဲ့သို့သော)အရာများသုံးပြီး ယောနိအတွင်းပိုင်းကို ထိုးသွင်းကာ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ကြပါတယ် ပိုးသတ်သန့်စင်ထားကြောင်း ကြေငြာထားရင်လည်း အသုံးပြုဖို့ မသင့်ပါဘူးသားအိမ်အတွင်းပိုင်းဟာအရမ်းနူးညံပြီး pH ပမာဏလွန်ကဲတဲ့ ရေနဲ့ တွေ့ရင် ပျက်ဆီးတတ်သလို အခြားဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေလည်း ရှိပါတယ်။ (၂) […]
”လက်ဖဝါးမှာပါတဲ့ ဂမ္ဘီရကြက်ခြေခတ်နဲ့ ပါတ်သက်၍ ထူးခြားချက်များ”
လက်ဖဝါးပေါ်က ( ဂမ္ဘီရ ကြက်ခြေခတ်) လက်ဖဝါးမှာပါတဲ့ ဂမ္ဘီရကြက်ခြေခတ်နဲ့ပါတ်သက်၍ လက္ခဏာကြည့်ပရိသတ်အတော်များများလာရောက်မေးကြသည့်အတွက်တင်ပြပေးလိုက်ပါသည်။ လက္ခဏာရှင်ရဲ့လက်ဖဝါးရဲ့အလယ်ဉာဏ်လမ်းကြောင်းနှင့်နှလုံးလမ်းကြောင်းကြားတဝှိုက်မှာကြက်ခြေခတ်အမှတ်သားလေးပါလာမယ်ဆိုရင်တော့ထိုအမှတ်အသားလေးကိုဂမ္ဘီရကြက်ခြေခတ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ ( 1 ) လက္ခာဏာ ဗေဒင် နဲ့ ထူဆန်းနက်နဲတာတွေကိုဝါသနာပါပြီး အခြားပညာရပ်များကိုလေ့လာလိုက်စားတတ်သည်။ (2) အလိုလျှောက် နှုတ်ထွက်စကားတွေမှန်တတ်သည် ။နှုတ်ဆက်အာဆက်ရှိတတ်သည်၊မိမိပါးစပ်ကပြောတာနဲ့ကောင်းခြင်း၊ဆိုးခြင်း ချက်ခြင်းဖြစ်တတ်သည်။ (3[…]
”မျက်နှာ သစ်သောအခါ ကုသိုလ်(၅)မျိုးကို ရအောင်ယူနည်း”
(၁) “ဒါ နကုသိုလ်” မနက်အိပ်ယာထမျက်နှာသစ်တော့မယ်ဆိုရင် ရေဖလားထဲကို ရေထည့်လိုက်ပါ မျက်စိနဲ့မြင်သာမယ့် ရင်ခေါင်းလောက်မှာ ရေဖလားကို ကိုင်ထားပါ။ ရေဖလားကို အပေါ်တော့ မမြှောက်လိုက်ပါနဲ မတ္တာပို့တဲ့အခါ အဆင်မပြေမှာစိုးလို့ပါ။ လက်ကကိုင်ထားတဲ့ရေဖလားနဲ့ ” မြတ်စွာဘုရား မျက်နှာသစ်တော်ရေ ကပ်လှူပါ၏ဘုရား ဘုရားတပည့်တော်ကို သနားချီးမြှောက်သောအားဖြင့် မျက်နှာသစ်တော်မူပါဘုရား” လို့ဆိုပြီး ကပ်လိုက်ပါ။ […]
နဖူးပြောင်သူတွေရဲ့ သူများနဲ့မတူဘဲ ကွဲပြားတဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့ အားသာချက်တွေ
January 18, 2020 Khitalin Media 0
နဖူးကျယ်တဲ့သူလေးတွေကို သူငယ်ချင်းတွေက ပြောင်ကြီးလို့ ခေါ်ပြီး စနောက်တတ်ကြတာကြောင့် အများစုက ဆံမြိတ်လေးတွေနဲ့ နဖူးကျယ်ကျယ်တွေကို ဖုံးအုပ်ထားတတ်ကြပါတယ်။ တကယ်တော့ နဖူးကျယ်တယ်ဆိုတာ ကောင်းတဲ့ လက္ခဏာရပ်ဖြစ်ပြီး နောက်ထပ် ဒီလိုထူးခြားချက်မျိုးတွေကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်ထားတာပါနော် …. ။ (၁) ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးတတ်တယ် သူတို့တွေဟာ တခြားသူတွေကို မှီခိုတာထက် ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ်ကိုယ် ရပ်တည်ပြီး […]
« 1 … 8910 … 164 »